23 Apps I Kwesịrị Iji Download Tupu ejegharị | Save A Train
Home > Travel Europe > 23 Apps I Kwesịrị Iji Download Tupu ejegharị
Oge Ọgụgụ: 12 nkeji(Emelitere ikpeazụ On: 10/07/2020)
Ego ngwaAnyị na nso nso dere a blog on Nọkwa na ụmụaka na a ụgbọ okporo ígwè ma nye gị ụfọdụ Atụmatụ nke na-edebe-ntakiri-unu ọbịa. ịgụ akwụkwọ, egwu na-akpọ Uno na ige audiobooks bụ maa a kwesịrị onye ọ bụla, mana enwere ọtụtụ ngwa ị ga-ebudata tupu ịgagharị ebe ahụ anyị kwenyere na ọ bụghị naanị ịnabata gị mana nyere gị aka ime gị na njem ihe haziri na fun! Si App Store na Google Play, anyị na-na mechie elu ụfọdụ ndị kasị mma 23 Apps I Kwesịrị Iji Download Tupu ejegharị. All ị chọrọ bụ a ama na tupu gị ọzọ njem.
Isiokwu a na-dere ịkụziri banyere Train Travel na e mere site Save A Train, Weebụsaịtị ndị ụgbọ oloko dị ọnụ ala N'ụwa.
1. N'ihi na ebe a na-Mụrụ: Airbnb
Ma ọ bụ iwu na ndị obodo gị na-eleta ma ọ bụ na, Airbnb bụ a ezinụlọ aha. Nke a bụ maa otu n'ime Apps mkpa ka ị download n'ihu na-ejegharị ejegharị. The ngwa na-enye anya dị ọnụ ala karịa ahịa, na ndị ọzọ ezigbo ahụmahụ site n'ikwe ka ndị ọrụ na ọnụnọ na a obodo, ma ọ bụ n'ụlọ ha. The ngwa na-enye a atụmatụ akpọrọ Njem, nke awade Ahụmahụ ịhọrọ site n'oge ọnụnọ gị. Anyị ji n'aka na ọ ga-abụ ogologo ruo mgbe ọ na-enye ihe niile ị chọrọ ke kiet ke otu laa, ma n'ihi na ugbu a, nhọrọ ha na-enye bụ maa kwesịrị nbudata ọ.
Dijon ji ụgbọ okporo ígwè gaa Paris
Imszọ ụgbọ oloko na-agbago Paris
Lille ji ụgbọ okporo ígwè gaa Paris
2. Ngwa ịchọrọ ibudata tupu ịga njem ime ụlọ nkwari akụ ikpeazụ nke nkeji: Hotel Tonight
Nke bụ eziokwu bụ na mgbe ụfọdụ gị Airbnb ga-ada site na. Nke ahụ bụ nanị downside nke ngwa. Ma, ọ bụghị na-echegbu onwe, ị ka nwere ike nwere a plan B. Hotel Tonight bụ a pụrụ ịdabere na ọrụ na-eto nke ọma na ikpeazụ-nkeji amụọ. The ụlọ ọrụ mmekọ na hotels na-enye ego na efu ụlọ, na ị ga-enwe ike ka akwụkwọ onye na n'okpuru 10 sekọnd. Ị na-na- 24/7 ahịa ọrụ si Hotel Tonight otu, bụrụ na ihe na-aga awry.
Bygbọ okporo ígwè na Linz na Salzburg
Njem ụgbọ oloko gaa Paris
3. Ngwa iji budata tupu ịga njem maka hotels dị ọnụ ala: Hopper
Hopper bụ a ụgbọ elu na hotel na ngwa na-achọta gị ihe kasị mma ahịa maka ntinye akwụkwọ. Ọ nyochara data soro ahịa na ịkọ ọnụ ala ugboro idobere ụlọ na akwụkwọ flights. Ya dị website, ọ obụrede mbụre a 95% ọma ọnụego na amụma na abụọ ruo a afọ tupu oge eruo. Ọ dịghị njọ!
Salzburg na Vienna site na ụgbọ okporo ígwè
Ụgbọ okporo ígwè ruo Munich na Vienna
Ji ụgbọ okporo ígwè gaa Graz na Vienna
Prague to Vienna site na ụgbọ oloko
4. Ngwa ị ga-ebudata tupu ntụnye ọnụahịa njem: KAYAK
Ka anyị na-na-na na na-ama nwetara a ole na ole ngwa ọdịnala ebe a maka ulo na njem atụmatụ, KAYAK bụ ihe niile na-na-na-na ngwa na-enyere aka tụnyere ahịa n'etiti dị iche iche search engines niile njem gị mkpa. Nke a na-agụnye hotels, flights, ụgbọ ala a na-ebiri, na ọbụna njem nchịkọta. Na-uru nke ya oke ichekwa atụnyere ka akwụkwọ niile njem ị ga-mkpa ke otu ebe.
Munich na Salzburg site na ụgbọ oloko
Ụgbọ okporo ígwè na Vienna gaa Salzburg
Ji ụgbọ okporo ígwè gaa Graz na Salzburg
Lọndọn na-aga Lyon site na ụgbọ okporo ígwè
5. Ngwa ịchọrọ ibudata tupu ịga maka tiketi ụgbọ oloko: Save A Train
Ọ bụrụ na ị na-ejegharị ejegharị nile Europe, e nwere ihe a ezi ohere na ị ga-eme ka ụzọ gị ụgbọ okporo ígwè. njem ọha na eze nhọrọ Europe na-ma ama maka ha cross-mba njikọ, na mgbe flights na-ngwa ngwa, ụgbọ oloko na-ihe adaba, ọzọ mgbe, na ọrụ ọtụtụ ndị ọzọ ụzọ gasị. Ke edinam na ị na-na na na mkpa gbaa ụgbọ okporo ígwè, download Save A Train ngwa mee ịzụta ọnụ ala ma na mfe.
Dusseldorf ji ụgbọ okporo ígwè gaa Munich
Ji ụgbọ okporo ígwè Dresden gaa Munich
Nuremberg ruo Munich site na ụgbọ okporo ígwè
Bygbọ okporo ígwè na Bonn ruo Munich
6. Ngwa iji budata tupu ịgagharị Ntụrụndụ Na-aga: Netflix
Site ugbu a, anyị niile maara na ihe Netflix bụ. Ọ bụrụ na ị na-adịghị, welcome a dum ọhụrụ ụwa! Banye maka a free ikpe, ibudata niile mmasị na-egosi ma ọ bụ na fim ma na-ekiri ha mgbe ị na na a ụgbọ okporo ígwè, na-enweghị mkpa maka WiFi! Buru n'uche na dị iche iche na-egosi dị dị ka ihe mba i na-eleta, ma ọ bụrụ na ị na-nnọọ riri ahụ otu, na-eme ka n'aka na ibudata dị ka ọtụtụ ngosipụta dị ka o kwere tupu ị ịgafe ókè!
Amsterdam na London site na ụgbọ okporo ígwè
Rotterdam na-aga London site na ụgbọ okporo ígwè
Paris ji ụgbọ okporo ígwè gaa London na-aga
Brussels na London site na ụgbọ okporo ígwè
7. Kewaa gị mmefu na Friends: Splittr
Ejegharị ejegharị na ndị enyi? Great! Otu n'ime ihe ndị kacha ụzọ ka ihe na-ihere bụ ma ọ bụrụ na ị na-kewaa njem gị ego n'ụzọ ziri ezi. Zere esemokwu na-eji gị cell ekwentị mfe gbawara n'etiti expenses n'etiti enyi. Ọ bụrụ na ị nwere a otu, nke a bụ otu nke ngwa ị chọrọ download tupu na-aga. Splittr bụ kpọmkwem maka ndị na-ejegharị ejegharị. Tinye expenses ke laa, gụnyere ndị na-akwụ ihe na ngwa ga-eme ndị ọzọ.
Na ịga mba dị iche iche na iche iche ego? Nsogbu adịghị. All ego na-akwado na ị nwere ike mix ego na-enweghị na-eme ego akakabarede onwe gị.
Mmiri mmiri ozuzo Amsterdam na Berlin
Leipzig na ụgbọ okporo ígwè gaa Berlin
Anogbọ oloko na-aga Hanover na Berlin
Hamburg na Berlin site na ụgbọ okporo ígwè
8. Iji Mụta Olee otú Ọtụtụ Iji NDỤMỌDỤ: Globe Atụmatụ
Ka a na-ngwa bụ nanị dị na iOS, GlobeTips bụ a magburu onwe ngwá ọrụ enyemaka ndị mgbagwoju anya banyere Inye ego mmiri oyi mba. Nke a dị mkpa na ndị njem na - emebu akụ na ụba nke ngụkọta ndị na-agbasi mbọ ike mgbe ọ na mba ofesi. Ma ị na-na France ma ọ bụ Spain, jiri ohere GlobeTips mụta ego ole ị ga-eji tuo aka n'ọrụ niile.
Nuremberg ruo Stuttgart site na ụgbọ okporo ígwè
Munich na Stuttgart site na ụgbọ okporo ígwè
Frankfurt iji Stuttgart banye ụgbọ okporo ígwè
Heidelberg ruo Stuttgart site na ụgbọ okporo ígwè
9. Iji zuo ike: Obi nwayọọ
Ọ bụrụ na ị na-na na a ụjọ na-atụ njem, otu ngwa ịchọrọ ibudata tupu ịgagharị bụ Calm, ọ bụ ngwa ga-abụ ezigbo enyi gị. Nke a kemfe njem na ngwá ọrụ nwere ibu nke dị iche iche na-eche n'echiche maka nchegbu, onwe-obi, iku ume na ndị ọzọ. Ọ na-enye obi ụda-enyere gị aka zuru. Dị ka a mesiri njem onwe m, Obi nwayọọ na-enyere m na-m, ọma, wetuo obi n'okporo ụzọ.
Paris iji ụgbọ okporo ígwè gaa Strasbourg
Luxembourg iji ụgbọ okporo ígwè gaa Strasbourg
Nancy ka Strasbourg jiri ụgbọ okporo ígwè
Dijon ji ụgbọ okporo ígwè ruo Strasbourg
10. Iji Nọgide Na-echeta: Live Trekker
Na-ede ihe a na magazin bụ agadi-akwụkwọ egwu. Ma ihe ọ bụla na akwụkwọ pụtara na ị na-agba ọsọ n'ihe ize ndụ nke ịbụ ndị ya, karịsịa mgbe ị na-eleta multiple mba. Ọzọ ngwa nke nbudata tupu ịga bụ livetrekker.com. Journal gị njem otú i nwere ike anya azụ na gị njem na ihe mmekọrịta map. The ngwa tracks gị dị ka ị na-aga, marking a red akara tinyere a map na kpọmkwem ụzọ na ị na-; ngwa nwekwara Monitors gị ọsọ na elu, na-eme ka ọ dị ukwuu maka njem njem. Tinye ihe oyiyi, video, ọdịyo na ederede n'ụzọ, eke a multimedia njem edetu i nwere ike ịkọrọ! Free, iOS na gam akporo, livetrekker.com
Rimini ji ụgbọ okporo ígwè gaa Milan
Rome iji ụgbọ okporo ígwè gaa Rome
Bologna ruo Milan ụgbọ okporo ígwè
Verona ruo Milan site na ụgbọ okporo ígwè
11. Iji Nọgide Yourself Haziri: PackPoint
Ọ bụ eleghị anya dị nnọọ obi ụtọ nke na-aga na ihe njem, ma e nwere bụ mgbe ihe anyị na-echefu na-eme ma ọ bụ na-abịa tupu a njem. Luckily technology bụ ebe a na-azọpụta n'ụbọchị ọzọ. download PackPoint! Ọ na-ese na amụma ihu igwe n'ihi na ụbọchị na ebe nke gị na njem. Ọ ga-ajụ gị iji họrọ eme gị nwere ike na-ekere òkè gị n'oge njem, dị ka a nzukọ maka azụmahịa, a igwu mmiri na a ọdọ mmiri, ma ọ bụ a fancy nri abalị. Mgbe ahụ, ọ ga-achụ a mbukota ndepụta nke ihe ị kwesịrị ị na-eme ka dabeere na ndị a na-eme. Snazzy, nri? I nwekwara ike ịkọrọ ihe ị chọtara na ndị enyi gị, na-eme ka ha njem mfe, oke! ka na-echeta nke a dị mkpa n'ọnụ Apps ị mkpa na tupu na-aga.
Brussels na Amsterdam site na ụgbọ okporo ígwè
Hamburg na Amsterdam site na ụgbọ okporo ígwè
Togbọ okporo ígwè na-aga Berlin na Amsterdam
Paris iji ụgbọ okporo ígwè gaa Amsterdam
12. N'ihi Advice On Activities: kpugheere
Kpugheere bụ ibu ngwa na ike na-enye gị ọtụtụ nde reviews nke dị nnọọ banyere ihe ọ bụla, na a ngwa ngwa na ụzọ dị mfe! The akụkụ kasị mma banyere ya bụ na reviews, echiche, videos, na foto ndị si REAL ndị mmadụ, ya mere na ị maara na ọ bụ ziri ezi! Nwalee kpugheere si Near Me ọrụ na-chọta ọma-enyocha ebe nso, ma nke kacha mma mma ngwa nwere na-enye bụ ọnụ ọgụgụ nke mba ọ na-akwado - ọ bụ naanị banyere n'ebe nile, na-eme ka ya a dị mkpa ndu n'ihi na ọ bụla njem. Ị nwekwara ike ịrịọ kpọmkwem njem ajụjụ na ngwa si forums ma ọ bụ tinye gị onwe gị reviews na a yiri ụzọ enyemaka.
Cologne ruo Frankfurt site na ụgbọ okporo ígwè
Munich na Frankfurt jiri ụgbọ okporo ígwè
Hanover ruo Frankfurt site na ụgbọ okporo ígwè
Hamburg ruo Frankfurt site na ụgbọ okporo ígwè
13. Mụta ikwu okwu Dị A Obodo: Duolingo
Ọ bụ ezie na na-ekwu okwu nwayọọ nwayọọ na n'elu-ikwubiga okwu ókè n'aka mmegharị yiri fun, mgbe ụfọdụ, o nwere ike inwe obere agwụ ike. Tinye Duolingo. Ọ bụrụ na ị na-na na oké njọ banyere ihe na-na na obodo, ibudata a na ngwa!
Ọ na-enye mbido-larịị ọmụmụ, ma ọ bụ na-a oké ngwá ọrụ n'ihi na ndị na-achọ ka ahịhịa elu na asụsụ dị iche iche. I nwekwara ike nkata na bots na họrọ asụsụ. Nke a pụrụ ịbụ nnọọ ihe na-enye aka mgbe ị na-agbalị ịmụta nkebi ahịrịokwu na ị na-yiri ka na-eji ọtụtụ ná mba ọzọ.
Luxembourg iji ụgbọ okporo ígwè gaa Brussels
Antwerp na ụgbọ okporo ígwè gaa Brussels
Amsterdam na Brussels site na ụgbọ okporo ígwè
Paris iji ụgbọ okporo ígwè gaa Paris gaa Brussels
14. Iji Chọpụta ihe ha na-agwa: Google Translate App
Ezie na anyị na-ama na-atụ aro Duolingo, ma ọ bụrụ na ị na-na na na a oge-crunch na-achọ ka ha na-ekwurịta okwu na ezigbo oge, Google Translate bụ ngwa na-eji. Ọ na atụmatụ olu ude na ihu ọma ọ bụla ndị mba ọzọ asụsụ ị mgbe zutere, na-eme ka a otu nke kasị mma translation apps gburugburu. Ọ bụ amiable ma na ị nwetara ihe gam akporo ma ọ bụ iPhone, na ọbụna usable offline.
Togbọ okporo ígwè na Berlin gaa Dresden
Hanover ruo Dresden site na ụgbọ oloko
Potsdam ka Dresden jiri ụgbọ okporo ígwè
Nuremberg ruo Dresden site na ụgbọ okporo ígwè
15. Iji Mee New Friends: meetup
Ọ bụrụ na ị na-na na ụdị njem nke na-enwe mmasị ka ndị enyi ọhụrụ mgbe ejegharị ejegharị, anya apụghị ịgafe. Meetup bụ ihe ngwa raara nye-enyere gị aka izute dị ka kpọrọ folks niile gafee n'ụwa. I nwere ike na-etolite mmasị dabeere iche iche, na ike ihe dị ka mmanya crawls na nri na obodo. The ngwa ọbụna nwere a ọnọdụ maka ezinụlọ isonye na nwa ewu-enyi na enyi na-eme. Nice!
Nuremberg iji ụgbọ okporo ígwè gaa Prague
Munich na Prague iji ụgbọ okporo ígwè rụọ ya
Togbọ okporo ígwè gaa Berlin na Prague
Traingbọ oloko na Vienna na Prague
16. Iji Nweta Around Mgbe ị na-abata: über
Ọ bụ ezie na anyị ga-mgbe niile nwere ike ikwu iji a ụgbọ okporo ígwè kama a ụgbọ ala mgbe ejegharị ejegharị, ma ọ bụrụ na ị na-ahụ onwe gị bịarutere abalị ma ọ bụ na-aga ebe enweghị ọrụ ị ga-mkpa na-eji über. Mgbe ọ bụghị mba nile nwere über ma ọ bụ ya US osompi Lyft, fọrọ nke nta ka ọ bụla mba nwere a taxi ngwa nke ụdị ụfọdụ. Ma ị na-na Kazakhstan ma ọ bụ France, chọta obodo gị ngwa taxi ma hụ na ibudata ya tupu hopping na ụgbọ oloko.
Munich na Zurich site na ụgbọ okporo ígwè
Togbọ okporo ígwè na-aga Berlin na Zurich
Basel ruo Zurich site na ụgbọ okporo ígwè
Ụgbọ okporo ígwè na Vienna ruo Zurich
17. Iji Navigate Ndị asọfe Okporo ámá: Google Maps App
Ozugbo ị kwụsịrị ụgbọ na hụrụ onwe gị na-awagharị awagharị na n'okporo ámá na-achọ ndị kasị mma baguette, ị ga mkpa Google Maps na-gburugburu. Gịnị? N'ihi na Google Maps bụ otu n'ime ụwa ji mma navigation apps. Si na-eje ije ntụziaka iji na ụgbọ okporo ígwè schedules, Google ka ị kpuchie. ọbụna ka mma, ị nwere ike ibudata map maka ojiji offline, nke pụtara na mpaghara nwere WiFi nwere ntụpọ ị ka nwere ike ịchọta bistro zoro ezo na ala.
Iji download map, nanị isi Google Maps gị ama na ịnyagharịa ka map ị ga-amasị iji. Ozugbo ọ hiwere gị chọrọ ebe, pịnye na “OK map” n'ime search mmanya. Google ga-amalite download offline map na ekwentị gị n'ihi na ị na-eji n'oge ọ bụla. Ọ bụ ya!
La Rochelle si Nantes jiri ụgbọ okporo ígwè
Toulouse na La Rochelle jiri ụgbọ okporo ígwè
Bordeaux na La Rochelle ji ụgbọ okporo ígwè
Paris na La Rochelle jiri ụgbọ okporo ígwè
18. Ngwa iji budata iji soro njem gị: TripIt
TripIt bụ a njem nsuso ngwa na-enyere aka ịhazi ihe niile ozi gị na otu ebe. Si ụgbọ elu ntinye akwụkwọ na hotel abụọ, TripIt ahazi ihe niile n'ime ihe dị mfe na-agụ njegasi na eme ka ị nọgide na track. Ma ejikọta gị akaụntụ ozugbo na ngwa, ma ọ bụ zipu gị niile nkwenye email, na TripIt ga-eme ndị ọzọ. Dị na desktọpụ, Android ma ọ bụ Apple iPhone, ị ga-enwe ike iji ya ebe ọ bụla n'ụwa.
Genoa si ụgbọ okporo ígwè gaa Venice
Turin na Venice site na ụgbọ oloko
Parma na Venice site na ụgbọ oloko
La Spezia ji ụgbọ okporo ígwè gaa Venice
19. Mara Gị Ego Exchange Rate: Ego App site Save A Train
Ezie na nke a nwere ike ịbụ a nta ọzọ niche, e nwere ọtụtụ ugboro m na na na na ụzọ enweghị data ma ọ bụ WiFi na-achọsi ike ịmata ọnụego mgbanwe. Ma ọ bụ a Come taxi ọkwọ ụgbọala ma ọ bụ a tour na-achọ na ị na-akwụ ụgwọ na ego, nwere ngwa na aka eme ka a ego Ntụgharị nwere ike ịbụ a godsend. Save A Train Ego ngwa ọrụ na ma ọ bụ offline ya mere na ọ bụ mgbe niile dị mgbe ị kwesịrị ya.
Basel ruo Interlaken site na ụgbọ oloko
Bern na ụgbọ okporo ígwè ruo Bern
Lucerne na Interlaken ụgbọ okporo ígwè
Zurich na Interlaken ji ụgbọ okporo ígwè
20. n'ihi na ihe niile: WhatsApp
Ọ bụrụ na ị adịghị ugbua nwere nke a na ngwa na ekwentị gị, weta ya. Mgbe North America ka n'ụzọ dị ukwuu Agbaghara data dabeere mobile ngwa, WhatsApp bụ na n'ụwa nile maka ozi, video oku na olu oku. Ewu ewu bụ ndị dị otú ahụ na ọtụtụ ulo oru esenidụt arụ ọrụ na a WhatsApp nọmba na mgbakwunye ma ọ bụ ọbụna na lieu nke a ọkọlọtọ nọmba ekwentị. Tụkwasị anyị obi mgbe anyị kwuru na ị ga-ebudata WhatsApp.
Florence ruo Arezzo site na ụgbọ oloko
Perugia ruo Arezzo site na ụgbọ okporo ígwè
Bologna ruo Arezzo site na ụgbọ okporo ígwè
Siena na Arezzo Train
21. Ngwa ịchọrọ ibudata tupu ịga njem gị: LoungeBuddy
Ezie na ọ bụghị mgbe niile kasị mma echiche iji ofufe, karịsịa n'ime Europe, Mgbe ụfọdụ, ị ga-mkpa enwetaghị a ụgbọ elu gaba ebe ụgbọ oloko nwere ike ghara ịga. Ọ bụrụ na ị na-ejedebe na ọdụ ụgbọ, ime onwe gị a amara na ibudata LoungeBuddy, a kemfe njem ngwa na-enye gị ohere ịzụta ego ohere ọdụ lounges. Nke a bụ-enye aka karịsịa na ndị ogologo layovers, dị ka ọdụ lounges enye free nri na ihe ọṅụṅụ. ọzọ ihe, ha na-eme dị ka a ebe mgbaba si na na na naa mgbe hụrụ na ọdụ ọnụ otú gị ọzọ akwụsị ga-abụ ihe na-atọ ụtọ.
Togbọ okporo ígwè si Berlin gaa Aachen
Frankfurt na Cologne site na ụgbọ okporo ígwè
Dresden ka Cologne jiri ụgbọ okporo ígwè
Aachen ka Cologne jiri ụgbọ okporo ígwè
22. N'ihi North America Na Europe: Metric Nchigharị App
Mgbe ndị ọzọ na-amasị na-achị ọchị na North America na ha peculiar n'idebe ndị eze ukwu usoro n'ihe, o nwere ike a dị oké njọ na-akpata nchegbu mgbe ha na-isi esenidụt. Otú ngwa ngwa na ọgu anọ na iri kilomita otu awa? Ego ole ka a kilogram nke onyinye itu? Niile ajụjụ ndị a zara enweghị na-achọ-enweghị isi na site na nbudata na metric Nchigharị ngwa na ekwentị gị tupu ị malite njem gị ma ọ bụ iji Save A Train Ẹkot ngwa dị na anyị ngwa ọdịnala na ngalaba nke Save A Train Blog.
Berlin na Rothenburg Ob Der Tauber jiri ụgbọ okporo ígwè
Stuttgart na Rothenburg Ob Der Tauber site na ụgbọ oloko
Munich na Rothenburg Ob Der Tauber site na ụgbọ okporo ígwè
Frankfurt ruo Rothenburg Ob Der Tauber site na ụgbọ okporo ígwè
23. Iji Tinye The US: Mobile Passport App
The naanị ọchịchị na ngwa na nke a ndepụta, Mobile Passport na-awa site US Customs na Border Protection na enyemaka njem banye US na ala. Download ya n'ihu gị na-abata na United States na-eji ya edejupụta gị ozi na gị cell ekwentị. mgbe, n'okpuru gị ụdị ozugbo ị na-emetụ ala na ikwu oke akara maka mbata na ọpụpụ kiosks na US. Ọ bụ free na mfe iji!
Bremen ruo Nuremberg site na ụgbọ oloko
Leipzig ruo Nuremberg site na ụgbọ okporo ígwè
Hanover ka ụgbọ oloko ruo Nuremberg
Hamburg na Nuremberg site na ụgbọ okporo ígwè
Nke ahụ bụ ndepụta anyị nke ngwa kachasị mma ibudata tupu ịga njem, ọ bụ na njem ụgbọ oloko dị ogologo ma ọ bụ naanị njem obodo. Ọ bụrụ na ị mkpa ọ bụla enyemaka ọzọ na njem gị atụmatụ, Save A Train na-enye na-azụ tiketi na ọnụ udu, gwakwara elu gị ego n'ihi na ihe fun eme mgbe ị na-abata na gị ebe!
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị? Pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fapps-download-traveling%2F- (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro)
Ngwa longtrainjourneys Train Travel ụgbọ okporo ígwè njem Travel traveltips